-नेपाल लाइफको एफपिओ आजदेखि, कहाँकहाँ गर्न सकिन्छ आवेदन ? :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
नेपाल लाइफको एफपिओ आजदेखि, कहाँकहाँ गर्न सकिन्छ आवेदन ? म्युचअल फन्डहरुसमेत दोस्रो बजारमा लगानी नगरेर एनएलआइसीको एफपिओ पर्खेर बसेकाले अधिक आवेदन पर्ने सम्भावना
काठमाडौं–नेपाल लाईफले बुधबार (पुस २७) देखि फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) निस्कासन खुला गरेको छ । कम्पनीले ३१ लाख कित्ता सेयर निस्कासन गर्न गरेको छ । सेयर विक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ । नेपाल लाइफले १ सय रुपैयाँ मूल्य अंकित सेयरमा १३२५ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर १४२५ रुपैयाँ प्रतिकित्तामा एफपिओ निस्कासन गर्न लागेको हो ।
नेपाल लाइफको एफपीओमा न्युनतम १० कित्ता र अधिकतम ३० हजार ९ सय ६० कित्तासम्मका लागि आबेदन गर्न पाईने छ । लगानीकर्ताले १० कित्ता र १० ले भाग जाने कित्ताका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् । नेपाल लाइफको एफपिओ भर्न विक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल र सिद्धार्थ बैंकका सबै शाखाहरुबाट आवेदन गर्न सकिने छ ।
कम्पनीले अरु बैंकमा समेत आवेदन संकलन केन्द्र राखेको छ । नेपाल लाईफले सर्बसाधारणको सेयर अनुपात बृद्धि गर्न ३० लाख ९६ हजार ४२९ कित्ता एफपीओ जारी गर्न लागेको हो । कम्पनीको एफपीओमा माघ २ गतेसम्म आबेदन गर्न सकिने छ ।
नेपाल लाइफको एफपीओ निश्काशनपछि प्रिमियमा संकलन गरेको रकम ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जगेडा कोषमा जम्मा हुने छ । यसपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ४७ करोड नाघ्ने छ ।
राम्रो नाफा कमाइरहेको कम्पनी भएकाले सबैको यसको एफपिओमा आकर्षण छ । त्यसैले बजारमा एनएलआइसीको एफपीमा लगानी गर्न नगद साँचेर राखेका छन् । विभिन्न म्युचअल फण्डहरुले समेत दोस्रो बजारमा लगानी नगरेर राखेको नगद यही एफपिओमा लगानी गर्ने तयारी गरेका छन् ।
त्यसैले एनएलआइसीको एफपिओमा अधिक आवेदन पर्ने सम्भावना छ । यही अबस्थालाई दृष्टिगत गरी विक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले सिद्धार्थ बैंकका सबै शाखासहित अरु बैंकमा समेत गरी ७९ स्थानबाट आवेदन संकलन गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छ ।